China Promotional 12oz Ecological Black Canvas Shopping Bag ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Zhihongda
စျေးမြှင့်တင်စျေးပေါ 12oz ဂေဟစနစ်က Black Canvas Shopping Bag
၁။ ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည် - ဤလေးလံသောအိတ်များသည်ကြီးမားပြီးအစားအသောက်ဆိုင်အတော်များများတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးသင်နှင့်အချိန်နှင့်ငွေကုန်သက်သာစေသည်။ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်
2. HEAVY-DUTY: ပိုလေးသောပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်စဉ်သို့မဟုတ်ပုံမှန်ကဲ့သို့အပိုကြာရှည်ခံမှုအတွက်သိုင်းကြိုးများကိုရှေ့နှင့်နောက်ဖက်တစ်လျှောက်လုံးချုပ်ထားသည်။ ပခုံးအရှည်ကြိုးများကသင့်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
၃။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုအလှဆင်ခြင်း၊
4. အသုံးအများဆုံး - ဤအိတ်များသည်အစားအသောက်ဆိုင်များ၊ ကမ်းခြေ၊ ရေကန်၊ ပျော်ပွဲစား၊ ခရီးသွားခြင်း (သို့) နေ့စဉ်စားသုံးရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
5.BIODEGRADABLE - ဒီအိတ်တွေဟာဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပလတ်စတစ်အိတ်တွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ပစ္စည်းအမည် စျေးမြှင့်တင်စျေးပေါ 12oz ဂေဟစနစ်က Black Canvas Shopping Bag
နောက်တစ်ခု: OEM ကွက်လပ်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်စျေးဝယ်သည့်ပတ္တူစကိတ်တုတ်အိတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်
စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောခေါက်သိမ်းနိုင်သောစျေး ၀ ယ်ပိတ်ချော ...
သဘာဝအလွတ်ထုံးစံလိုဂို eco-friendly ပုံနှိပ် ...